Anjiajia -Ambatoboeny: ho lasa tanàna fieren-dahalo raha tsy andraisana fepetra | Région Boeny
Anjiajia -Ambatoboeny: ho lasa tanàna fieren-dahalo raha tsy andraisana fepetra
5 octobre 2016 A La Une, Actualité
Dahalo roa indray no tratran’ny fokonolona sy ny mpitandro filaminana ny Alahady 02 oktobra 2016. Tafa-poritsaka ny iray, ary maty kosa ny iray rehefa nitifitra zandary nefa tsy nahavoa, ka namaly ireto farany.
Mbola mitohy ny hetsika manokana iadiana amin’ny asan-dahalo ao amin’ny faritra Ambatoboeny sy ny manodidina. Tanàna malaza amin’izany ny kaomina Anjijia, izay hitobian’ireo mpiavy avy amin’ny tapany atsimon’ny nosy. Ka taorian’ny fisamborana ireo olon-dratsy atao hoe tarika Barinjaka ny herinandro lasa teo tany an-toerana, dia olona roalahy indray no nampiahiahy ny fokonolona ka nanaovan’ny mpitandro filaminana fanaraha-maso. Rehefa nosavain’ny zandary karatra izy ireo dia nitsoaka ny iray. Mody nisava ny harona nentiny toy ny hamoaka kara-panondro kosa ny iray, kanjo basy no navoakany ary dia nitifitra ireo zandary avy hatrany izy.
Tsy nipoaka nefa ilay basy poleta vita gasy nampiasainy. Ho fiarovan-tena dia namaly tifitra ireo zandary, ka izao maty izao ilay dahalo, araka ny fizarana vaovao nataon’ny komandin’ny kompanian’ny zandary ao Ambatoboeny, ny Kap Razanaparany Félix.
“Tsy faly amin’ny fahafatesan’olona akory izahay fa io dahalo io mpanisy ratsy anay, nefa ny zandary iray nokasainy tifirina miaro olona zato fara-fahakeliny eto aminay” hoy Gaston, solotenan’ny fokonolona nanatri-maso tany an-toerana.
Manao antso mafy amin’ny fitondrana ireto fokonolona ny mba hanampiana ny miaramila any Anjiajia. Raha ny voalazan’ny Kap Razanaparany Félix, dia eo amin’ny mponina 2200 eo no sahanin’ny zandary iray any an-toerana ankehitriny. Ny asan-dahalo nefa tena mirongatra. Manao antso avo amin’ny Fitsarana koa izy ireo ny mba hampiharana ny sazy faran’izay henjana sy ny tsy hivoahan’ireo dahalo ny fonja mihitsy raha azo atao.
Ity dahalo maty ity izao dia efa voafonja tany Toliara no tonga nialokaloka sy nanao asan-dahalo taty Anjiajia izao, araka ny voalazan’ny taratasy hita teny aminy niaraka tamin’ilay basy vita gasy, famaky, bokin’omby, panneau solaire, telefaonina finday ary bala.
Miasa anatina tamba-jotra ireo dahalo
Ankoatra ireo dia, miasa amina tamba-jotra misy olona maro, lahy sy vavy, ireto dahalo ao Ambatoboeny ireto raha ny karine feno anarana sy laharan-telefonina hita teny amin’ilay maty ihany.
Anatin’ny tamba-jotra iray hoy ny tompon’andraikitra dia misy ny mpampiantrano, ny mpanome ody, ny mpamatsy fitaovam-piadina ary ireo patron’aomby izay mpandray ny halatra, toy izay tratran’ny zandarin’ny borigadin’ Ankazomborona Marovoay ny volana febroary lasa teo.
Ary ny tena henjana dia ireo izay mpanao intervention fotsiny mba hahazoan’ireo dahalo sazy malefadefaka na fahafahana vonjy maika rehefa voasambotra izy ireo. Ka miverina ankianja indray ireo olon-dratsy avy eo, manao valifaty mahery vaika amin’ny fokonolona sy ny mpitandro filaminanana.
Anisany mampanahirana ny asanay ao anatin’izany hoy ny Kap Razanaparany Félix ny fifampidiran’ny farim-piadidim-pitsarana eo amin’ny faritra Boeny sy Betsiboka. Ny Fitsarana Maevatanana Betsiboka mantsy no misahana ny raharaham-pitsarana rehetra avy ao Ambatoboeny, izay ao anatin’ny faritra Boeny. Efa nisy hoy izy ny fangatahana ny hamindrana izany ho aty amin’ny Fitsarana Mahajanga, tamin’ireo isan’ambaratonga, saingy mbola tsy misy ny akony.
Ankoatra izay, ny fifindramonina sy ny fivezivezena tsy ampy fanaraha-maso sy fifehezana no tena rangory fototry ny afo amin’ny asan-dahalo ao Anjiajia sy ny manodidina ny alan’Ankarafantsika iny, hoy ihany ny Kapiteny. Tsy heloka hoy izy ny fifindramonina fa tokony misy taratasy sy foto-dia mazava ireo mpifindra monina sy mpandalo maharitra amina tanàna iray.